पत्रकार महासंघको साझा चरित्र र गरिमालाई उँचो राख्न मेरो उम्मेदवारी – उदय जीएम | रक्त न्युज
– उदय जीएम, समावेशी उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार तथा ,अध्यक्ष, प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपाल
० नेपाल पत्रकार महासंघको २६औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिको समावेसी उपाध्यक्षमा उम्मेद्बारी घोषणा गर्नुभएको रहेछ । तपाई आफ्नो उम्मेद्वारीको औचित्यता कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?
– म विगत २५ वर्षदेखि नेपालको मूलधारको पत्रकारितामा क्रियाशील छु । श्रमजीवी पत्रकारका समस्या तथा चुनौतीहरुसङ्ग आफै भुक्तभोगी छु । तिनलाई मैले आफैले नजिकबाट स्पर्श गरेको छु । त्यसकारण समस्या र चुनौतीहरुलाई महासंघको पहलमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? यो विषयमा म गम्भीर र प्रयत्नशील छु ।अर्को कुरा, प्रगतिशील पत्रकार संघको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका संगठनले दिएको छ । हाम्रो संगठनलाई महासंघमा अझै स्थापित गर्नुछ । केन्द्रीय सचिवको हैसियतले महासंघलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर मिल्यो । महासंघका समस्या के हुन् ? महासंघले सम्बोधन गर्नुपर्ने र लिनुपर्ने बाटो के हो ? कसरी नेपालका श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा गर्ने, कसरी उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ? नेपाली पत्रकारितालाई कसरी मर्यादित र विश्वसनीय बनाउने ? र, समग्रमा अग्रजको सम्मान र अनुजहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै महासंघको साझा चरित्र, समावेशी अनुहारलाई कायम राख्दै यसको गरिमालाई उँचो बनाउन पनि मेरो उम्मेदवारी जायज छ भन्ने लाग्छ ।
० यो निर्वाचनमा तपाइहरुका खास एजेण्डाहरु के के छन् ?
– पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारको हक–हित एवं मिडियाको विकास, प्रवद्र्धन तथा नागरिक अधिकार, लोकतन्त्रको पक्षमा नेपाल पत्रकार महासंघको गौरवपूर्ण ऐतिहासिक भूमिकालाई थप सबल र सुदृढ गर्न नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न निर्वाचनलाई प्रतिगामी कदमविरुद्ध स्पष्ट सन्देश दिनेगरी सम्पूर्ण व्यावसायिक पत्रकारहरुबीच बृहत्तर एकता कायम गरी अगाडि बढ्न भन्दै नेपाल प्रेस युनियनको नेतृत्वमा आपसी समझदारी एवं एकता गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छौं । विशेषतः नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न निर्वाचनमा प्रतिगामी कदमविरुद्ध रहेका पत्रकारहरुका संगठनबीचमा सहकार्य गरी साझा र समावेशी नेतृत्व चयन गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा निरन्तर खवरदारी गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता छं । मिडिया काउन्सिल विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका (अनलाइन) लगायतका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी, नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने किसिमका (संघ, प्रदेश र स्थानीय समेत) सरकारले अघि बढाएका विधेयकहरु फिर्ता गराउन थप संघर्ष गर्ने प्रतिवद्धता पनि हामीले व्यक्त गरेका छौं । श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत र व्यवसायिक हकहितका पक्षमा निरन्तर खवरदारी गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण संकटमा परेका साना तथा ठूला मिडिया उद्योगको पुनरुत्थानका कार्य अघि बढाउने हाम्रो पहल रहनेछ । त्यस्तै, सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई एकलौटी ढंगमा प्रस्तुत गर्न र अन्य राजनीतिक दलका समाचारप्रति दुर्भावना राखी सम्प्रेषण गर्न बाध्य पारी त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब दिने हर्कतप्रति आपत्ति जनाउँदै दबाबमा काम गर्न बाध्य पत्रकाहरुले पेशागत मर्यादामा रहेर गर्नुभएका कामप्रति ऐक्यवद्धता व्यक्त गरेका छौं ।स्वदेश तथा विदेशका सबै पत्रकारहरुको साझा र सर्वोच्च संस्थाको गरिमालाई अझ माथि उठाउने, श्रमजीवी पत्रकारहरुको समस्याको सम्बोधन, उनीहरुको क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि, पेशागत र भौतिक सुरक्षा, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी ऐनकानुन, निर्देशिका र विधेयकहरुको विरोध, स्वस्थ, मर्यादित र विश्वसनीय पत्रकारिताको विकास नै हाम्रा एजेण्डाहरु हुन् ।
० तपाईंहरु जसरी गठबन्धन बनाएर अघि बढिरहनु भएको छ, यो त अनौठो खालको देखियो नि । प्रगतिशील संगठनहरुको छुट्टै गठबन्धन बन्न नसक्नुको कारण के होला ?
– पहिलो कुरा त हाम्रो संगठनको भालुवाङ बैठकले नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न निर्वाचनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि पहल गर्ने भन्ने निर्णय नै गरेको छ । तर, हाम्रो चाहना र प्रयासले मात्र त्यो सम्भव नहुँदो रहेछ । एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति, राजनीतिक दाउँपेचको प्रभाव यता पनि छिर्नु लगायतका समस्याहरुले गर्दा आजको यो गठबन्धन तयार भएको हो ।
० प्रमुख भनिने संगठनहरु गठबन्धनप्रति इमान्दार रहनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
– उम्मेदवारी दर्ता हुँदा एकदमै गञ्जागोलपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । समयमै उम्मेदवारको टुङ्गो नलाग्दा यो स्थिति आएको हो भने उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने अवधिसम्ममा सबै कुरा स्पष्ट होला । तर, नियतवस बागी उम्मेदवारी हाल्न लगाइएको हो भने पनि त्यसपछि एउटा चित्र स्पष्ट देखिने छ । एउटा माघले जाडो जाँदैन । हामी पनि उहाँहरुका गतिविधि नियालिरहेका छौं । यद्यपि, अहिलेसम्म ठूला र हाम्रा पनि अभिभावक मानिने संगठनहरु गठबन्धनप्रति अन्तिमसम्म इमान्दार नै रहनेछन् भनेर विश्वस्त छौं ।
० केन्द्रीय समितिमा प्रगतिशील पत्रकार संघका तर्फबाट तपाईंसहित चारजनाको उम्मेदवारी देखियो । प्रदेश र जिल्लाहरुमा कुन ठाउँमा कुन कुन पदमा उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ ?
– केन्द्रीय समितिमा हामी चारजनाको उम्मेदवारी परेको छ । नीतिगत सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने संगठनहरुबीच समयमै साझा उम्मेदवारको टुङ्गो लागेको भए एउटा स्थिति हुन्थ्यो । उम्मेदवारहरुको टुङ्गो नलागे पनि हाम्रो दावीबमोजिम उम्मेदवारी दिएका हौं । यस विषयमा छलफल हुँदै जाला ।उता, प्रदेश र जिल्लाको कुरा गर्दा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा अध्यक्ष वा महासचिवको दावी हाम्रो छ । यद्यपि, सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने पक्षहरुबीच यो विषयमा छलफल हुन बाँकी नै छ । त्यस्तै, बाँके, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बागलुङ लगायतका जिल्लाहरुमा नेतृत्वको दावी हामीले गरेका छौं । अन्य प्रदेश र जिल्लाहरुमा कतिपयमा पदाधिकारीसम्म र कतिपयमा प्रतिनिधित्वको माग हामीले गरेका छौं ।
० तपाईं त यसअघि पनि केन्द्रीय समितिमा जनजाति सचिवमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी निभाइसक्नु भएको छ । आफ्नो कार्यकालमा तपाईंसहितको केन्द्रीय समितिले गरेका उल्लेखनीय कार्यहरु के के हुन् ?
– हाम्रो कार्यसमितिले नेपाल पत्रकार महासंघको ६६ वर्षे इतिहासमै पहिलोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा लैजाने ऐतिहासिक काम गर्यो । यसले गर्दा प्रतिनिधिमूलक महाधिवेशनबाट नेतृत्व चुन्ने पुरानो प्रचलन हटेको छ र अब देशैभरका सबै साधारण सदस्यले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्व छान्ने अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ । मुलुक कानुन निर्माणको चरणमा रहेकाले स्वभावैले हाम्रो कार्यसमिति विशेषतः यसमै अल्झिनु पर्यो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानुनहरु जसले दीर्घकालीन असर पार्दछन्, ती नआऊन् भनेर सरोकारवाला पक्षहरुसित लविङ गर्ने, विधेयकका नमूना मस्यौदा बनाएर दिने, त्यस्ता कानुनहरुविरुद्धमा सडकमै उत्रिएर संघर्ष गर्ने लगायतका कामहरु पनि महत्वपूर्ण छन् । श्रमजीवी पत्रकारका करीव ५ सय मुद्दाहरुमा सम्वाद, संघर्ष र कानुनी उपचारमार्फत सम्बोधन गरिएका छन् । मिडिया उद्योगलाई सेवामूलक उद्योगका रुपमा स्थापित गरिएको छ । कोरोनाकालमा जागिर गुमाउन बाध्य पारिएका श्रमजीवी पत्रकार, बेतलवी राखिएका र तलब नपाएका श्रमजीवी पत्रकारहरुको हितमा ठूला भनिएका मिडियाहाउसमै गएर कालो ब्यानर टाँस्ने, घेराउ र प्रदर्शन गर्ने लगायतका कामहरु पनि भएका छन् । त्यसबाहेक नेपाली पत्रकारितालाई मर्यादित र विश्वसनीय बनाउने प्रयासहरु पनि भएका छन् । पत्रकार कल्याण कोषको बृद्धि गरिएको छ भने जेष्ठ पत्रकार जीवन निर्वाह भत्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
० निर्वाचनमा आफ्नो विजयप्रति कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
– महासंघको आसन्न निर्वाचनका लागि नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस संगठन नेपाल, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपाल, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन लगायतका संगठनहरुबीच मिलेर जाने सहमति भएको छ । यो नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको धेरै ठूलो शक्ति हो । सहमतिप्रति सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार बनेको अवस्थामा म र सिङ्गो प्यानलको विजय हुनेमा विश्वस्त छु ।
० देशको राजनीतिक अवस्था यतिबेला धमिलो हुँदै गएको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरु आन्तरिक कलहमा अल्झिरहँदा जनताको महान बलिदानीबाट प्राप्त अधिकारहरु गुम्ने सन्त्रास छाउन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा देशका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई कस्तो सुझाब दिन चाहनुहुन्छ ?
– देशको अवस्था अत्यन्त विडम्बनापूर्ण छ । हिजो हामीले लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता भोग्यौं, झेल्यौं । आम जनतालाई राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक अघि बढ्न सकेन भन्ने लाग्यो । पछिल्लो आमनिर्वाचनमा जनताले तलदेखि माथिसम्म, माथिदेखि तलसम्म पूरै सेट मिलाएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई बहुमतमात्र होइन दुईतिहाई नै दिए । दुःखको कुरा, परिणाम तपाईंहाम्रा आँखाको सामुन्ने छ । देश र जनताभन्दा गुटगत स्वार्थमा लिप्त हुने प्रवृत्तिले जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलव्धिमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । राजनीतिक स्वार्थ त सबैका हुन्छन् । लोकतन्त्र र देशको स्वार्थमा काम गरेमा सबै ठिक हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
० पत्रकारिता क्षेत्रभित्र पनि पछिल्लो समयमा विकृति र विसंगति बढ्दै गएको देखिन्छ । ती विकृतिहरुलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहालाई ?
– पहिलो कुरा त सामाजिक सञ्जालहरुलाई नै आमसञ्चार माध्यम ठान्ने र त्यहाँ देखिएका विकृतिलाई पत्रकारिताको विकृति मान्ने भ्रम छ । मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरुमा विकृति र विसंगति आएको मान्न सकिने अवस्था छैन । पछिल्लो समयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुमा केही विकृति तथा विसंगतिहरु देखिएका छन् । तिनलाई पनि पत्रकारहरुको दक्षता अभिवृद्धि, सीपको विकास, पत्रकार आचारसंहिताको शतप्रतिशत पालना र स्वनियमनको माध्यमबाट तिनलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यो त्यति सजिलो कुरा नभए तापनि सबैको प्रयासमा सम्भव हुनसक्छ ।
० अन्त्यमा, नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा देशभरिका श्रमजीवी पत्रकारहरुलाइ विशेष जोड दिएर भन्नुपर्ने तपाईका केही कुरा छन् कि ?
– म आफै मिडियाहाउसहरुबाट पीडित श्रमजीवी पत्रकार हुँ । श्रमजीवी पत्रकारका समस्याहरुलाई मैले नजिकबाट नियालेको छु, भोगेको छु, स्पर्श गरेको छु । अरु जम्मै कुराहरु पत्रकार महासंघका कामहरु होलान् तर श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहित, सम्मान, पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा नै मुख्य हो । त्यसकारण समावेशी उपाध्यक्षका लागि फैसला गरिदिनुहोस् भनेर देशभरका करीव १३ हजार पत्रकारमाझ आएको छु । आशा छ, फैसला सही गर्नुहुनेछ ।-नारायण शर्मा
अघिल्लो लेखमाम्यानमारमा मानव संहार, एकै दिन सयाैं प्रदर्शनकारी मारिए
अर्को लेखमाबहुमत जुटाउने नाममा अपराधीलाई माफी दिने प्रयास आपत्तिजनक : सांसद दुर्गा पाैडेल